Loza teny Ampitatafika :: Noafahana ilay mpamily nahafaty tovolahy telo • AoRaha
Loza teny Ampitatafika Noafahana ilay mpamily nahafaty tovolahy telo
Noentina teny amin’ny Fampanoavana, afak’omaly, ny tatitry ny fanadihadiana tamin’ny lozam-pifamoivoizana niseho teny amin’ny vahilava Ampitatafika, tamin’ny alin’ny talata 30 jolay lasa teo, izay namoizana ain’olona telo. Nahazo fahafahana vonjimaika ny mpamily nitera-doza, eo am-piandrasana ny fotoam-pitsarana azy.
Maty tsy tra-drano, tamin’io alin’ny talata nisehoan’ny loza io, ny tovolahy roa, sivy ambin’ny folo taona sy valo ambin’ny folo taona. Nindaosin’ny fahafatesana teny amin’ny hopitaly, afak’omaly, ny tovolahy iray, manodidina ny roapolo taona, izay tra-doza niaraka tamin’izy ireo.
Tsiahivina fa andian-jatovo dimy nanosika sy nitarika sarety teny amin’ny vahilava Ampitatafika ireo niharam-boina ireo. Avy nanatitra entan’olona teny Fenoarivo izy dimy mianadahy ary nikasa hamonjy fodiana eny Ampitatafika. Avy tao aorian’izy ireo ka nitodi-doha hiakatra aty an-drenivohitra ny fiara iray kamiao marika «Mercedes 409». Voadonan’ity fiara ny sarety. Nipitika izy dimy mianadahy. Namoy ny ainy teo no ho eo ny tovolahy roa. Naratra ny tovolahy sy vehivavy iray.
«Tsy nahatsiaro tena teny amin’ny hopitaly, nandritra ny fotoana nitsaboana azy, ilay tovolahy naratra. Tsy tana ny ainy, herinandro taty aoriana», hoy ny zandary. Voatazona teny amin’ny zandary, nandritra ny herinandro hatramin’ny fotoana niakarany teny amin’ny Fitsarana, ny mpamily.